Ajụjụ - Weifang Toption Chemical Industry Co., Ltd.
Mon-Fraị 7:00 AM ka 6:00 PM
Mmiri nke Barium
Calcium Bromide chọrọ
Maka ihe atụ, oge ndu bụ ihe dị ka ụbọchị 7. Maka imepụta oke, oge ndu bụ 20-30 ụbọchị mgbe ị natara ego nkwụnye ego. Oge ndu na-adị irè mgbe (1) anyị natara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere nnwapụta ikpeazụ gị maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge ndu anyị anaghị arụ ọrụ na oge ị ga - emechi, biko gafee ire gị maka ire ere gị. N'ọnọdụ niile, anyị ga-anwa igbo mkpa gị. Ọtụtụ mgbe anyị nwere ike ime ya.
WEIFANG TOPTION CHEMICAL ụlọ ọrụ CO., LTD
Ekwentị / WhatsApp: +86 13356367799
Calcium Bromide Anhydrous, Hydrosulfite, Calcium Bromide mmiri mmiri, Calcium Bromide Ngwọta, Natrium Hydrosulfite, Hydrosulfite De Sodium,